Otu Tianhui Int
Nkwuputa njikọta ụlọ ọrụ
site na nchịkwa na 21-06-13
Ndewo! Ezigbo ndị enyi anyị, ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie! Daalụ maka ụlọ ọrụ gị n'ụzọ! N'ihi njikọta azụmahịa nke ụlọ ọrụ otu anyị! Yancheng Tianzhihui Mat Co., Ltd. na Yandu Tianhui Egwuregwu Ngwa Ngwaahịa n'okpuru otu anyị na -achọ ijikọ ma rụọ ọrụ. Aha ọhụrụ mgbe ...
eva foam mat material Akụkụ na akpachapụ anya
A na -eji akwa akwa Eva ụfụfụ arụ ọrụ na ndụ, enwere ike ịhụ ya n'ụlọ, ebe egwuregwu, mgbatị ahụ na ebe ndị ọzọ. Mmepụta ihe EVA site na iji akwa ala nwere ọtụtụ uru. Dịka ọmụmaatụ: ezigbo nguzogide ujo, mgbochi mmiri, ihe akaebe ọkụ eletrik, wdg Ka anyị mara maka EVA ...
Ụfọdụ ezi uche gbasara akwa akwa yoga
Linen yoga mat bụ akwa yoga nwere ahịrị. A na -emezigharị ya na ndabere yoga ọdịnala. Ọ na -eji usoro yoga orthographic edepụta onye na -achị achị n'uche onye nkuzi yoga n'elu akwa iji nyere ndị na -eme ọrụ aka ime yoga asanas ziri ezi. Ọ dịkwa mma maka ...
Etu ị ga -esi debe akwa yoga TPE
Mgbe anyị na -eme yoga siri ike, akpụkpọ ahụ nwekwara ọtụtụ kọntaktị na teepu yoga TPE, mana imikpu mmiri na -eme ka teepu yoga TPE dị mfe ịmụpụta nje, na enweghị ike ileghara nhicha akwa yoga TPE. Yabụ kedu ka anyị si ehicha akwa yoga? 1. Họrọ ezigbo TPE yog ...
Kedu ihe kpatara eji akwa yoga TPE maka ime yoga
site na nchịkwa na 21-02-21
Mgbe anyị na -eme mmega yoga, anyị ga -ahọrọ ezigbo akwa yoga iji nyere aka. Ikekwe ụfọdụ ndị enyi ga -asị: “Enwere m ike iji blanketị ma ọ bụ ihe ụmụaka na -arị arị?”. Nke a nwere ike ịpụta na ị maghị ọtụtụ ihe gbasara yoga, na ị maghị ọtụtụ ihe gbasara ahụ gị. ...
Nkwuputa ezumike ezumike 2021 Spring Spring
site na nchịkwa na 21-02-10
Ezigbo ndị mmekọ n'ụlọ na mba ofesi: Daalụ maka nkwado gị n'afọ a. Oge ezumike anyị sitere na 2021-02-05 ruo 2021-02-18. N'ụbọchị nke asatọ nke ụbọchị nke asatọ nke ọrụ, enwere ike ibupu ụgbọ mmiri nkịtị. N'oge ememme opupu ihe ubi, oge nnyefe ga -eji nwayọ, yabụ oge nnyefe nwere ike ịbụ ...
Otu esi ahọrọ otu nguzogide
A na -akpọkwa ndị na -eguzogide ọgwụ ndị otu mgbatị ahụ ike, otu mgbatị ahụ mgbatị ahụ ma ọ bụ mgbatị ahụ yoga. A na -ejikarị latex ma ọ bụ TPE eme ha, a na -ejikarị ha etinye ihe mgbochi n'ahụ ma ọ bụ nye aka n'oge mgbatị ahụ. Mgbe ị na -ahọrọ otu nguzogide, ị ...
xpe na -akpụ akpụ na ihe dị iche
site na nchịkwa na 21-01-30
Anyị na -elekọta nwa ahụ nke ọma. Ọnwa ole na ole ka amụrụ nwa ahụ, nwa ahụ ga -amalite ịmụ nịịfe. N'oge a, a na-achọ akwa akwa na-akwagharị dị elu nke ga-enyere nwa ahụ aka ịmụta ịrịọ ma gbochie nwa ahụ ịdaba na mberede ma merụọ ahụ n'oge usoro a. B ...
Na -ekwu maka TPE Yoga Mat
A na -ekezi akwa yoga ugbu a n'ụdị abụọ: akwa yoga ọdịnala na akwa yoga dị mma. Yoga akwa ọdịnala enweghị ahịrị, na n'ozuzu ha na-enwe mmetụta nke nchedo, mgbochi na mwepụ, ebe akwa yoga dị mma nwere ahịrị. Ọ dị na akwa yoga omenala. Na ndabere nke inno ...
Banyere TPE yoga mat na-ebu na mmeghe mgbochi mgbochi Portable
Ọ na -abụkarị onye yogi ga -akwadebe akwa abụọ, otu maka ụlọ yana otu maka ịme n'èzí. Enwere ike ileghara ibu nke yoga TPE yoga dị n'ụlọ, mana akwa ahụ ga -adị mfe iburu. Nke mbụ, ịdị arọ kwesịrị ịdị nfe. Ọtụtụ ụdị ga-emepụta 1.5-3mm njem TPE yoga mats, nke nwere ike ịdị mfe ...
Kedu nha ọkọlọtọ TPE yoga mat
Nha nke akwa yoga TPE nke mba ụwa bụ 61cmx173cm na 61cmx183cm. Mana ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ụlọ ka bụ 61cmx173cm. Enwekwara nkọwa ndị ọzọ. Ihe mkpuchi yoga TPE a na -ebuga ugbu a na Japan bụ 65x175cm. Ọkpụrụkpụ nke TPE yoga ute bụ m ...
Onye njikwa ahịa ngalaba mba ofesi: Tony
Otu ụlọ ọrụ China Tianhui © Copyright - 2010-2021: Yancheng Tianzhihui Sporting Goods Co., Ltd. Ngwaahịa na -ekpo ọkụ, Map saịtị
Nnukwu ihe egwuregwu ụlọ egwuregwu mgbaghoju anya Mat, ihe egwuregwu mgbaghoju anya, Akpa Yoga, Akpa njem Yoga, Yoga Mat nwere akwa nhicha, Akpa njem Yoga Mat,